Daawo Sawirada Boqolaal Taageerayaasha Atletico Madrid ah oo sida geesiga u soo dhaweeyey Diego Costa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Boqolaal Taageerayaasha Atletico Madrid ah oo sida geesiga u soo dhaweeyey Diego Costa
Published on September 22, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(22-9-2017) Boqolaal ka mid ah Taageerayaasha kooxda Atletico Madrid ayaa si diiran u soo dhaweeyey Weeraryahanka dalka Spain ee Diego Costa kaas oo sirasmi ah loogu dhawaaqay in uu heshiis lagaaray Naadigiisii hore.
Xiddigaan ayaa ka soo duulay dalka Braziil waxaana safar dheer ka dib uu soo Gaaray Caasimada dalka Spain halkaa oo sida geesiga ay ugu soo dhaweeyeen Taageerayaasha kooxda Atletico Madrid.
Diego Cista ayaa lacadeeyey in uu dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Atletico Madrid ka dib markii laga cayriyey Naadiga Chelsea oo uu laqaaday Horyaalka dalka England Xiligii la soo dhaafay.
Atletico Madrid ayaa lasheegayaa in ay Diego Cista ku iibsadeen aduun lacageed gaaraya £60million Wxaana uu saxiixi doonaa heshiis 4 Sano ah oo uu ugu dheeli doono Naadiga Atletico Madrid oo uu dib ugu soo laabtay Markiisii labaad.
Xiddigaan ayaa Markii uu ka soo degay Garoonka diyaaradaha Magaalada Madrid waxa uu Saxaafada u sheegay in uu ku soo laabtay Gurigiisii isla markaana uu weligii jeclaa Atletico Madrid iyo Taageerayaasheeda sidoo waxa uu Diego Costa ku faanay in uu diidey kooxo aad u badan oo doon doonayey Saxiixiisa kana doorbiday in uu ku soo laabto Hoygiisa sida uu hadalka u dhigay.